လေးကျွန်းမြေ: March 2015
သူရဲကောင်း ။ ယောလုံမေ
ကျွန်​​တော်​ သူနဲ့ လိုက်​သွားချင်​တယ်​
ကျွန်​​တော်​အ​မှောင်​ မ​ကြောက်​တတ်​တာ ကြာပြီ
သူ့​ခြေရင်းမှာ ခယ ၀ပ်​စင်းချင်​လို့
ပြန်​လာခဲ့ပါ​တော့ ။ ။
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 6:41 AM
အော်သံ ။ မင်းညွန့်လှိုင်
ငါသူတပါး ယောက်ျားမိန်းမ မကွဲပြား
မျက်စိမျက်နှာပျက်နေပါရောလား ။ ။
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 6:24 AM
အ လံ ။ မောင်သော်တာ
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 6:17 AM
အိမ်ပြန်မလာတဲ့ ချေ ။ ဇေရ
ထွက်​သွားပြီး ပြန်​မလာတဲ့ အနီ​ရောင်​မိတ်​​ဆွေ
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 1:16 AM
သေကောင်ပေါင်းလဲ ကိုယ့်မှာ တသသ
တော်တော်လေးနက်တဲ့ ဒီကိစ္စ ။
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 12:49 AM
ရထား ။ ခက်ဦး
အရိပ် နဲ့ အကဲကြည့်
သူ့ကြည့် ငါ့ကြည့်မလုပ် နဲ့
ခေါင်းတွဲအော်သမျ ဥသြပဲ ။
၂၃ . ၃ . ၂၀၁၅
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 4:01 AM
ငါ့ ကို ပြန်တွေ့မှ
လုံခြုံမယ့်မြေ . . . .
လန်းမယ့်ရေ . . . .
သဘောမကျဘဲ လွမ်း လွမ်း နေရတဲ့
ဒီအမှတ်တရတွေ . . . .
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 3:41 AM
မင်းညွန့်လှိုင် + ရန်လင်းအောင်
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 7:36 AM
ကျည်ဆန် ။ မင်းညွန့်လှိုင်
ကျ ည် ဆ န်
အရိုးတွေမတွန်တော့မယ့်အတိုင်း ။ ။
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 6:19 AM
လူထုထဲ ဝဲပစ်လိုက်နိုင်တယ် ။
၅ . ၃ .၂၀၁၅
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 9:04 PM
အဖြူထည်အသံ ။ ကိုရုန်း
သူရှာမ တွေ့ ခဲ့။
ဘဝင် မကျနိူင် ခဲ့။
သူ ပိုင် ဆိုင် ထားတာ
သူမေ့လျော့နေ လေရဲ့ ။ ။
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 10:29 AM
နှင်းဆီလမ်းမ ။ ဒီသစ်
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 10:26 AM
တွင်းတိမ်တိမ် ။ မောင်သော်တာ
တွင်း တိမ် တိမ်
written by မောင် သော် တာ
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 10:19 AM
အ ချိန်က ပြောတဲ့ စကား များ
စိုး ရိမ်သံ အရောင် စိတ်မှာလက်တော့
ရ ယူ ခြင်း ထက် စွန့် လိုမှု က
ပြောင်း ပြန် စီးတဲ့ ဘဝ မွဲ ထဲ
ပေး ကမ်း ခြင်း တွေ အကုန်အစင်
ပါ ဝင် ပတ်သက် သူ များ ဟာ
ပြည်သူ ဖြစ်တယ် ။ ။
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 9:51 PM
တုံ့ပြန်ချက် ။ ခက်ဦး
တောင်းပန်ပါရစေ တဲ့ ။
ထောင်ဒဏ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးသား ။
ဗိုလ်ချုပ်က ပြန်မရတော့ဘူး ။
မတ် ၅ ၊ ၂၀၁၅
တာဝန် ဆိုတဲ့ အသရေမဲ့စာသား
ဒါမှ သူ့လူ ကို ကိုယ့်ဘက်သားအဖြစ်
အပြစ်ဆိုးနော်ပြေ အမျက်ငြိုးတော်ကြေလိမ့်မယ် ။
၉ . ၃ .၂၀၁၅
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 9:44 PM
အောက်ခြေမှတ်စု ။ ရန်လင်းအောင်
ထပ်တူပြင်းရှ နားစွင့်နေရ၏ ။
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 12:24 PM
မိုးမခ မိတ်ဆွေ ကဗျာဆရာ ကိုခင်လွန်း ၏
မိခင် ကွယ်လွန်ခြင်း သတင်းကြားရပါသဖြင့်
ကဗျာဆရာ ကိုခင်လွန်းနှင့် ထပ်တူ
လေးကျွန်းမြေ ကဗျာဆရာ များက
ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း … … … … …
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဝေးမှာ အသဲမာသယောင်ဆောင်နေရတဲ့ကောင်ရဲ့အမေ...
မထင်မရှား စာလေး ကဗျာလေး ချောင်ချီးချောက်ချက် ရေးနေတဲ့ သူပုန်လိုလို အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးသမားလိုလိုအကောင် ကျနော်ခင်လွန်းရဲ့အမေ ကွယ်လွန်ဆုံးပါးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်း ဒီမနက်ဖေ့စ်ဘွတ်စဖွင့်ဖွင့်ချင်း သိရပါတယ်။
အမေရေ ...ဒီဘ၀မှာတော့ အမေ့အိမ်ရိပ်ကိုအနှစ် ၂၀ နီးပါးပြန်မလာနိုင်တဲ့ကောင်ဟာ အခု အမေနောက်ဆုံးခရီးကို ထွက်ခွာသွားပြန်တော့လဲ အမေ့ဈာပန မြေကျချိန်လေးမှာ လက်အုပ်ချီကာ ကာယကံမြှောက် လာရောက်မကန်တော့တဲ့သားမိုက်ကြီးကို တမလွန်က ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါက ခွင့်လွှတ်ပါတော့အမေလို့ ရှိခိုးလိုက်ပါတယ်. ....
ကိုခင်လွန်း ၏ ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာ က ကူးယူပါသည် ။
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 12:16 PM
စက်ဝန်းအသံ ။ ကိုရုန်း
ရေခိုးရေ ငွေ့ တွေနဲ့ 
အရဲစွန့် တယ်လို့ 
မထင် ရ လောက်အောင်
သိစိတ်အလျင် နဲ့ 
ဟင်းလင်းပြင် ရသတစ်ခုပေါ့။ ။
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 8:54 AM
ရွှေဘ ဓာတ်ရှင် အကြိုက်သား မဟုတ်လား.....။
သား မကြောက်ဘူး အမေ......။
နန်းတော်ရာ ၊ တောင်ငူမြို့ ၊ အ.ထ.က (၂) မဂ္ဂဇင်း
အမှတ်၂ ၊ ၂၀၁၁
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 8:46 AM
ဘယ်တော့မှမလဲဘူး ။ မောင်သော်တာ
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 8:42 AM
သတိ ( ၁ + ၂ ) မင်းညွန့်လှိုင်
ပန်းကလေးတွေကို မနင်းမမိပါစေနဲ့ ။ ။
အိမ်တိုင်ကိုပင်ဆွဲနုတ်မှာ ။ ။
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 11:06 PM
မျက်လှည့်ပွဲ ။ ကိုသားကြီး
ဆန္ဒ ကို ရွှေဖြစ် ငွေ ဖြစ် အဂ္ဂိရတ် ထိုးကြည့်တော့
ငြိမ်းချမ်းရေး ချိုးကူသံများ ကြားရတော့ မလိုလို
နေ့ချင်းညချင်း ကြီးပွားတော့ မလိုလို
မျှော်လင့် ချက် အိမ်တစ်ဆောင် မီးတစ်ပြောင်က
အလင်း ယိုင်ယိုင် ကြား
အခုထိ သရိုးမစွဲ သေးဘူး ။ ။
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 7:47 PM
ဆက်ထုံးအမှတ် မတ်၂၇ ။ခက်ဦး
ကင်ပေတိုင် ကြီးစိုးတဲ့ခေတ် ။
ဒါ ကင်ပေတိုင်တွေ ကြီးစိုးတဲ့ခေတ် ။
ပေါ့သလား ငန်သလား ကြေးမများနဲ့
အရည်စိမ်သလေး မစိမ်သလေး စံမရွေးနဲ့
ကင်ပေတိုင်တွေ ထွားကျိုင်းတဲ့ခေတ် ။
ပါးဘယ်ညာ အခါတစ်ရာ ချပလေ့စေ
ထောင်ထဲ ချောင်ထဲက အော်သံများ
အားလုံး ကောင်းပါသည် ခင်ဗျား ။
မိုးလုံးပြည့်အောင် လမ်းသလားတဲ့ခေတ် ။
ခံပြင်းတဲ့ အုံ့ပူ လှိုက်ဆူလို့ ရှိန်မြင့်
အနီးဆုံး ရန်သူကို ရှာတိုက်ကြ
အနီးဆုံး ရန်သူကို ရှာ တိုက် ကြ တဲ့.....
အဖိနှိပ်ခံတွေ မထွေပြား မဝေဝါး
ချွေး သွေး အသက်တွေနဲ့
ရာဇဝင်တွင်အောင် အလှထူးတော့တယ် ။
နွေကဦးတဲ့ အဲဒီ့ နွေဦးမှာ.....
အယုတ်သဘောတွေမစွဲ ကံကြမ္မာ အလှည့်မယ်
ဥသြတွေလည်း အသံသာခဲ့တယ် ။
၂၅ . ၃ . ၂၀၁၅
(မတ်၂၇ တော်လှန်ရေးနေ့ အကြို ခံစားမှု)
# မူရင်း ဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်ကို credit ပေးပါတယ် #
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 6:37 PM
မင်းညွန့်လှိုင် မွေးနေ့ သို့ yla
ငါတို့ ထုတ်လုပ်တယ် ………
၄၃ နှစ် မှသည်
လိုရာလမ်းမှာ လန်းဆန်းပါစေ ။ ။
မင်းညွန့်လှိုင် မွေးနေ့ သို့
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 6:32 PM
မင်းညွန့်လှိုင် မွေးနေ့ ( အမှတ်တရ )
* ငါက ကဗျာနဲ့တွေ့ရင်
စယ်လီဘရစ်တီမဟုတ် ဂွတ်မစ်ဇာမဟုတ် ယူရိုပီယန်ဆန်သူ
လည်းမဟုတ်လေတော့ မွေးနေ့ဆိုတာ ဆံသာကေဖြတ်မပြု
ပျိုရွယ်စဉ်အခါကမွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြပြီး သန်းထိုက် နေမျိုး ဇော် မိုး ကျော်မိုးလွင်တို့နဲ့ထန်းရည်စုသောက်ခဲ့ဖူးတာကလွဲလို့ပေါ့လေ။
ကျနော်တို့ရှေ့ကလမ်းမကြီးတလျှောက်မှာတော့ ဗုဒ္ဓ ခရစ်တော်
မှိုင်း ဆန်း တာရာ နဲ့ လူထုအမေတို့ရဲ့မွေးနေ့ကြီးတွေက
တော့ သူငယ်ချင်းများကိုမှတ်မှတ်သားသားသတိပေးတတ်ပြန်တယ် ။
၂၆ မတ် ၂၀၁၅
ကိုသီရေ ခွင့်လွှတ် ။
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 6:28 PM
တနင်္ဂနွေစစ်စစ်များအဓွန့်ရှည်ပါစေ ။ ။
လွမ်းဖို့ မဆုံး ………………… ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ် က … မေမေ
မုန်တိုင်းဆင်လို "… တဲ့ ။
မတ်လ ၁၈ တဲ့
သူ့မှာ သူ့ဆူးသူ မခူးရက်တဲ့
မာန နဲ့ ရှင်သန် ။
အဲ့ဒါ… ချန်ပီယံလက် ဖြစ်တယ် ။
၅၈ နှစ် လောင်မြိုက်
ဘယ်အပူ ဘယ်သူ ကြိုက်သလဲ
လက်တစ်ခုပ်စာလေ အဝရှူပေရော့ ။
" တွန့်ခေါက်တောင်တန်းတွေ ဆန့်သွားပါရော"
မတ်လ ၂၀ နေ့လယ် ၂ နာရီခွဲ
အနာတရတွေနဲ့ သစ္စာရေတွေ သောက်သောက်ပြီး
အဲဒီနေ့က အီကွေတာရာသီ ။
ခံနိုင်ရည်တဲ့ မမျှ ခံနိုင်ရည်ရှိပြခဲ့တဲ့ နောင်တော်
၁၉၇၄ ခုနှစ် ခုနှစ် က ရေတာရှည်မြို့မ
ဒေါင်းစကြာ …ထွက်ပြူလာ"လို့ မရေး
"နေထွက်လာပြီ" ဆိုတဲ့ ခေတ်စမ်းအရေး ဆွေးနွေး
ကေတုမြေ အလင်းသစ်… သုံးနှစ်ပြည့်
လကွယ်ည " အနှစ်သုံးဆယ်
မောင်လေးအောင် ။ မောင်ယဉ်မွန် ။ဖော်ဝေး
၁၉၈၃ ခုနှစ် မတ်လ ၁၈
အသက် ၅၈ ချစ်သော မေမေ
၁၉၉၈ ခုနှစ် မတ်လ ၁၈
အသက် ၅၈ ချစ်သော နောင်တော်
သြော် …… ချစ်ရသူတို့ရေ
နွေခေါင်ခေါင် ဝေမှောင်အုံ့ပျ ။ ။
( ၁၉၉၈ မတ် ၁၈ တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သော
ကဗျာဆရာ ကေတု ဘုန်းမော် သို့ )
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 2:58 AM
ကေတုဘုန်းမော်အမှတ်တရ ။ ခက်ဦး
``ငါသေရင် ငါ့အသုဘကို သရဏဂုံ တင်ချင်တင် မတင်ချင်နေကွာ မင်းတို့သဘောပါ ၊ ဒါပေမယ့် ကဗျာလေးတွေတော့ရွတ်ပေးကွာ ၊ ကဗျာနဲ့ သရဏဂုံ တင်တာလေး ငါခံချင်တယ်´´
``မင်း ရေတာရှည် ၊ ပျဉ်းမနား ရော အုတ်တွင်းက ကဗျာဆရာတွေရော စုံအောင်ဖိတ်နော် အောင်ထက် ၊ မကျန်စေနဲ့ ၊ စည်စည်ကားကားလေးဖြစ်ပစေ ကြားလား´´
``ဆရာဝန်က ၂လ အလွန်ဆုံးပဲလို့ ပြောတယ်တဲ့ကွ´´
``ဘယ်က ပေါက်ကရ ရမှာလဲကွ´´
``အောင်ထက် အဖေတို့ လိုင်းခန်းထဲက အိမ်ကို ခဏပြောင်းရလိမ့်မယ် ဒီနေ့ညနေ သွားပြောချေ ၁လ ၂လ လောက်ပါပဲကွာ´´
........ ငါ့အသုဘကိစ္စဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကိစ္စပြီးတော့ပြန်ပြောင်းခဲ့ပေါ့ကွာ´´
ကိုယ့်ဇာတ်သိမ်းခန်း ကိုယ်စီရှိနေခဲ့ပြီးမှန်း ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတယ် ။
ပေးစာ တစ်စောင်ရဲ့ရင်ကွဲသံ အားလုံး လက်ခံထားခဲ့ကြပြီးသား မွေးကတည်းက ။
ဒါပေမယ့် ပုထုဇဉ် သာမန်လူသားများ ကျွန်တော်တို့တတွေထဲ ကြိုပြင်ခွင့် ကြိုမြင်ထားခွင့် ရနိုင်ခဲ့ကြသူတွေ များများစားစား ရှိခဲ့ကြပါရဲ့လား ။ ရှိနေကြပါရဲ့လား ။
ကေတုဘုန်းမော်ဆိုတဲ့ အောင်ထက်တို့အဖေ ရင်ပတ်ထဲက ပျိုးယူ မွေးထုတ်ထားတဲ့ နောက်ဆုံးကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ဆွဲကိုင်မြှောက် မရဏဆီတည့်တည့် ပြုံးပြုံးကြီးကြည့် အားကုန် ပစ်ပေါက်ပြသွားခဲ့ဖူးတာ ဒဏ္ဌာရီမဟုတ် ပါးစပ်ပုံပြင်တစ်ပုဒ် မဟုတ် လူသားဆန်တဲ့မှတ်တမ်းတစ်ပုဒ် တကယ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အဲဒါ ဝတ္ထုတိုတစ်ပုဒ် မဟုတ်ဘူး ၊
ကဗျာတစ်ပုဒ် ဟုတ်တယ် ။
သင်မရယ်ဘဲကို မနေနိုင်အောင်ပေါ့ ။
လေညှင်း လက်တစ်ခုပ်စာ မရှိပြီ
နေရီရီ ကမ္မဋ္ဌာန်းရနံ့နဲ့ ငါပဲ ။
၁၉၉၈ ၊ မတ် ၊ ကလျာ မဂ္ဂဇင်း
၁၉၉၈ မတ်လ ကလျာက ကဗျာ သူငယ်ချင်း တူ သား ကဗျာဆရာတွေနဲ့အတူ သူ ဖတ်ခွင့်ရသွားခဲ့သေးတယ် ။
၁၉၉၈ မတ် ၁၈ မှာပဲ
ပျံ သွားခဲ့ ။
၂၄ . ၃ . ၂၀၁၅
ကေတု ဘုန်းမော် သို့
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 1:59 AM
မြန်မာ့ကဗျာနေ့ ။ လှိုင်ဘွား
ဆရာလှိုင်ဘွား ၏ facebook စာမျက်နှာမှ
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 6:33 AM
မြစ်ကြည့်သူ မောင်နီမွန် Family မဂ္ဂဇင်း မတ် ၂၀၁၅
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 10:55 PM
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 9:18 PM
အဓိပ္ပါယ်ကောက်ရန် /မကောက်ရန် ။ ရန်လင်းအောင်
ဒါဆို ဒါပဲ ။
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 9:10 PM
ဗိုလ်ချုပ်ရှိတယ် ……… မင်းညွန့်လှိုင်
ဗို လ် ချု ပ် ရှိ တ ယ်
သံလွင် ချင်းတွင်း စစ်တောင်း ဧရာ
စာလုံး ဆေးစက် စောင်းကြိုးမှာ
သေသေချာချာရှိနေတယ် ။ ။
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 11:01 PM
ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့ လေးကျွန်းမြေ ကဗျာများ
န တ် ဖြ စ် တဲ့နေ့
ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါ တဖျပ်ဖျပ် ။ ။
စီးလေ ရာ ဝ ယ် … …
လက်ဖျားထက် စကားလုံးများ ။
ဆပွား အလှတရား အနုပညာ
ချိတ်သွယ် ဆင့်ကမ်း ဆန့်တန်းလိုက်ကြ ။
ကဗျာ့ပန်းတွေ ဝေလို့ ။ ။
__________ အမှတ်တရတွေ ………
သွေးကြောင်နေရင် ပိုရှည်လျားမယ် …
မင်း ပြန်လာမှ ငါရှိမယ်
သဘောမကျဘဲ လွမ်း လွမ်းနေရတဲ့
ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါစေ ။ ။
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 6:53 AM
အချစ်ရေ လာဟေ့ . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . ရာပြည့်ဆန်းဆီလှမ်းကြမယ်
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 9:54 PM
အောင်ဆန်းမော်ကွန်း မဂ္ဂဇင်း ၂/၂၀၁၅
တမူး အောင်ဆန်းရာပြည့် ကဗျာများ
မိုးမခ မဂ္ဂဇင်း ၂/၂၀၁၅
တို့တွင် ဖော်ပြပြီး ။
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 9:15 PM
ငြိမ်းစေသူ ဗိုလ်ချုပ်ရာပြည့် ကဗျာ
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 8:12 PM
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 5:04 PM
မွေးနေ့များ … ရန်လင်းအောင်
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 4:54 PM